Balanballe oo lagu dagaalamay | Gedoonline
Balanballe oo lagu dagaalamay	Added by Editor on August 7, 2012.Saved under Latest News	BALANBALE(GMN)-Iska hormaad kooban ayaa lagu soo waramayaa in maanta uu ka dhacay Degmadda Balanballe ee gobbolka Galgaduud ku dhexmartay kooxo hubeysan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Labo ruux ayaa ku geeriyootay tacshiirada halka tiro kalana ay ku dhawacmeen kuwaas oo u badnaa dhinacyadda gacan ka hadalka uu dhexmaray.
Gacan ka hadalka maleeshiyadda ayaa ka danbeysay markii uu isfahwaa xaga lahaanshaha dhulka uu soo dhexgalay maleeshiyadaasi.
Maamulka A.W.J ayaa ciidamo u diray halka ay tacshiiradu ka dhacday kuwaas oo kala diray kooxihii hubeysanaa.
Dagaal beeleed ka dhacay Balanballe
Tuulo barwaaqo oo lagu dagaalamay
Barakacyaal lagu laayey Xerada Badbaado